လူတျောတျောမြားမြား single ဘဝကို ဘာကွောငျ့ နှဈသကျလာကွတာလဲ?
HomeLoveလူတျောတျောမြားမြား single ဘဝကို ဘာကွောငျ့ နှဈသကျလာကွတာလဲ?
ယနခေ့တျေမှာ လူတှဟော တဈကိုယျရေ တဈကာယဘဝကို ပိုပွီးနှဈသကျလာကွပါတယျ။ ဒါဟာ ဘာကွောငျ့လဲ?။ တဈယောကျတညျးနခေငျြတာလား ဒါမှမဟုတျ ဘယျသူနဲ့မှ မဆကျဆံခငျြတာလား စတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှမြေားစှာ ရှိနပေါတယျ။ ဒါကိုမှားယှငျးတယျ လို့တော့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ဒါဆိုရငျ လူတှဘောလို့ တဈယောကျတညျးနခေငျြရတာလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှကေို တူတူလလေ့ာကွညျ့လိုကျရအောငျ။
၁ ။ သူစိမျးတှနေဲ့ အခြိနျကုနျရတာ ပိုပြျောဖို့ကောငျးတယျ။
လူတှဟော သူတို့ရဲ့အလုပျကလူတှနေဲ့ အမွဲတမျးပွောဆိုဆကျဆံ ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အခွားလူမြားနဲ့လညျး လူမှူရေးအရ ပွောဆိုရတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေို ခဈြသူရညျးစားက လိုကျပွီး သဝနျတိုနမေယျဆိုရငျ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ ဒါတှကွေောငျ့လညျး single ဘဝကို နှဈသကျသူတှေ မြားပွားလာတာပါ။
၂ ။ အမြိူးသမီးတှကေ လှတျလပျမှုတှကေို သဘောကပြါတယျ။
အမြိူးသမီးတှဟော ကိုယျတိုငျလုပျပိုငျခှငျ့နဲ့ လှတျလပျခွငျးဆိုတဲ့ အရာတှကေို မွတျနိုးပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အလုပျအပျေါမှာ တနျဖိုးထားပွီးတော့ အခဈြကွောငျ့ ခြုပျခယျြတာတှကေို မလိုလားပါဘူး။ သူတို့လိုခငျြတာက လှတျလပျမှုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ အလုပျကိုအလှနျကွိုးစားပွီး အောငျမွငျမှသာ လကျထပျကွပါတယျ။
၃ ။ အသကျကွီးလာတာနဲ့ တဈယောကျတညျး နခေငျြလာကွတယျ။
အသကျ ၄၀ ကနေ ၈၅ အကွားရှိ လူတှဟော တဈယောကျတညျးနရေတာ ပိုပွီးကောငျးတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဒါတှဟော ခဈြသူရညျးစားရှိသူတှရေဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ နှိုငျးယှဉျလို့မရပါဘူးတဲ့။ တဈယောကျတညျးနသေူတှကေ အဆငျပွတေယျလို့ပွောရငျ လူအမြားစုက မယုံသင်ျကာဖွဈကွပါတယျ။
၄ ။ လူတှနေဲ့ ပွိုငျမငွငျးခငျြတော့ဘူး။
တဈစုံတဈယောကျနဲ့ ခဈြခငျြပမေယျ့လညျး ပွိုငျမငွငျးခငျြတဲ့အခကျြကွောငျ့ တဈကိုယျတညျး နလောကွပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈစဉျမြိူးဟာ ရှားပါးပွီးတော့ လူတဈဦးနဲ့တဈဦးကို ဝေးကှာစပေါတယျ။ သငျဟာ သငျ့ခဈြသူရဲ့ အမွငျကိုပွောငျးလဲဖို့ ပွောပမေယျ့လညျး မပွောငျးလဲရငျတော့ သငျ့အတှကျ အခြိနျဖွုနျးရာ ကပြါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဆငျမပွနေိုငျဘူး ဆိုပွီးတော့ တဖွညျးဖွညျး ဝေးကှာလာရပါတယျ။
၅ ။ တဈပါးသူကို လှယျလှယျနဲ့ မယုံကွညျတော့ဘူး။
အခဈြဇာတျလမျးတှေ အမြားကွီး ရှိနပေမေယျ့လညျး ဇာတျလမျးတိုငျးကတော့ အဆုံးသတျ မလှနိုငျပါဘူး။ ဒါတှဟော တဈစုံတဈဦးကို ယုံကွညျစဖေို့အတှကျ ခကျခဲစပေါတယျ။ တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျ သိဖို့ကလညျး ကွာလှနျးလှပါတယျ။
၆ ။ မိမိကိုယျမိမိ တနျဖိုးထားခွငျး
အိပျစကျခွငျးကို နှဈသကျတဲ့အခါ၊ တဈယောကျတညျး နရေတာကို ပြျောလာတဲ့အခါ ဘဝလကျတှဲဖျော မရှိလညျး ဖွဈတယျလို့ ယူဆလာကွပါတယျ။ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အတှေးခံစားမှုတှေ ထပျတူထပျမြှ မြှဝခေံစားဖို့မလှယျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ လူတဈဦးတဈယောကျရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြတှနေဲ့ မရှငျသနျခငျြတော့လို့လညျး တဈယောကျတညျး နဖွေဈသှားကွပါတယျ။
၇ ။ တခွားသူတှကေို မမှီခိုခငျြတော့ဘူး။
သငျ့မှာခဈြသူရညျးစားရှိလကျြ အလုပျလုပျတာထကျ သငျတဈကိုယျတညျး ဖွဈနတေဲ့အခြိနျ အလုပျလုပျတာက သငျ့အတှကျ အခှငျ့အလမျးမြားစှာ ရှိစပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျ အလုပျလုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ အားနညျးခကျြတှကေိုလညျး ပိုသိပွီး ပိုပွုပွငျလာနိုငျပါတယျ။ သငျ့မှာအခွားလူတှအေတှကျ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေး အကွံပေးစရာ မလိုတဲ့အတှကျ သငျ့မှာအနားယူခြိနျတှေ မြားစှာရှိလာပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အားလပျခြိနျကို ဘယျလိုကုနျဆုံးရမလဲဆိုတာ သငျကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြလာနိုငျပါတယျ။
လူတော်တော်များများ single ဘဝကို ဘာကြောင့် နှစ်သက်လာကြတာလဲ?
ယနေ့ခေတ်မှာ လူတွေဟာ တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယဘဝကို ပိုပြီးနှစ်သက်လာကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ?။ တစ်ယောက်တည်းနေချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူနဲ့မှ မဆက်ဆံချင်တာလား စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေများစွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကိုမှားယွင်းတယ် လို့တော့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ဒါဆိုရင် လူတွေဘာလို့ တစ်ယောက်တည်းနေချင်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကို တူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
၁ ။ သူစိမ်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကလူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းပြောဆိုဆက်ဆံ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားလူများနဲ့လည်း လူမှူရေးအရ ပြောဆိုရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ချစ်သူရည်းစားက လိုက်ပြီး သဝန်တိုနေမယ်ဆိုရင် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေကြောင့်လည်း single ဘဝကို နှစ်သက်သူတွေ များပြားလာတာပါ။
၂ ။ အမျိူးသမီးတွေက လွတ်လပ်မှုတွေကို သဘောကျပါတယ်။
အမျိူးသမီးတွေဟာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အရာတွေကို မြတ်နိုးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားပြီးတော့ အချစ်ကြောင့် ချုပ်ချယ်တာတွေကို မလိုလားပါဘူး။ သူတို့လိုချင်တာက လွတ်လပ်မှုပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ အလုပ်ကိုအလွန်ကြိုးစားပြီး အောင်မြင်မှသာ လက်ထပ်ကြပါတယ်။
၃ ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်း နေချင်လာကြတယ်။
အသက် ၄၀ ကနေ ၈၅ အကြားရှိ လူတွေဟာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ချစ်သူရည်းစားရှိသူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူးတဲ့။ တစ်ယောက်တည်းနေသူတွေက အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရင် လူအများစုက မယုံသင်္ကာဖြစ်ကြပါတယ်။
၄ ။ လူတွေနဲ့ ပြိုင်မငြင်းချင်တော့ဘူး။
တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ချင်ပေမယ့်လည်း ပြိုင်မငြင်းချင်တဲ့အချက်ကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်း နေလာကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိူးဟာ ရှားပါးပြီးတော့ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကို ဝေးကွာစေပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူရဲ့ အမြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ ပြောပေမယ့်လည်း မပြောင်းလဲရင်တော့ သင့်အတွက် အချိန်ဖြုန်းရာ ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆင်မပြေနိုင်ဘူး ဆိုပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာလာရပါတယ်။
၅ ။ တစ်ပါးသူကို လွယ်လွယ်နဲ့ မယုံကြည်တော့ဘူး။
အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီး ရှိနေပေမယ့်လည်း ဇာတ်လမ်းတိုင်းကတော့ အဆုံးသတ် မလှနိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ တစ်စုံတစ်ဦးကို ယုံကြည်စေဖို့အတွက် ခက်ခဲစေပါတယ်။ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် သိဖို့ကလည်း ကြာလွန်းလှပါတယ်။
၆ ။ မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးထားခြင်း
အိပ်စက်ခြင်းကို နှစ်သက်တဲ့အခါ၊ တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို ပျော်လာတဲ့အခါ ဘဝလက်တွဲဖော် မရှိလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလာကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွေးခံစားမှုတွေ ထပ်တူထပ်မျှ မျှဝေခံစားဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ မရှင်သန်ချင်တော့လို့လည်း တစ်ယောက်တည်း နေဖြစ်သွားကြပါတယ်။
၇ ။ တခြားသူတွေကို မမှီခိုချင်တော့ဘူး။
သင့်မှာချစ်သူရည်းစားရှိလျက် အလုပ်လုပ်တာထက် သင်တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်နေတဲ့အချိန် အလုပ်လုပ်တာက သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အားနည်းချက်တွေကိုလည်း ပိုသိပြီး ပိုပြုပြင်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာအခြားလူတွေအတွက် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အကြံပေးစရာ မလိုတဲ့အတွက် သင့်မှာအနားယူချိန်တွေ များစွာရှိလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အားလပ်ချိန်ကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးရမလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လာနိုင်ပါတယ်။